Taliye xigeenka ciidanka booliska Puntland oo ka warbixiyay hawl-gallo ay bilihii ugu danbeeyay ka wadeen magaalada Gaalkacyo. – Radio Daljir
Taliye xigeenka ciidanka booliska Puntland oo ka warbixiyay hawl-gallo ay bilihii ugu danbeeyay ka wadeen magaalada Gaalkacyo.
Seteembar 17, 2012 3:56 b 0
Gaalkacyo, Sep 17- Col; Muxiyadiin Axmed Muuse taliye-xigeenka ciidanka booliska Puntland oo maanta waraysi siiyay Radio daljir ayaa sheegay inay meel wanaagsan u marayso qorshayaashii ay ku doonayeen adkaynta iyo xasilinta magaalada, taasoo qayb ay ka yihiin? la dagaalanka kooxaha nabadda ka soo horjeeda iyo kuwa ku dhex jira ka ganacsiga maandooriyaha.
Taliyaha ayaa sheegay inay baaritaano xoogan ka sameeyaan magaalada,isla markaana ay sii wadi doonaan, Col; Muxiyadiin ayaa tilmaamay inay baareen hotteelo fara badan oo ay kaga shakiyeen in lagu abaabulayo khal-khalinta amniga gobolka.
Hawll-galadan ciidanku ay ka wadaan magaalada waxaa ugu danbeeyay mid habeen saddexaad ay ka fuliyeen magaalada kaasoo ay ku baacsadeen gaari si sharci-darraa ku soo dhaafay goob ay ku sugnaayeen ciidanka ammaanka, falkaasi oo taliyuhu uu ku tilmaamay mid hada arintiisa lagu jiro baaritaanana ay ku socdaan, isagoo intaa ku daray in gacanta lagu hayo raggii gaarigaasi watay.
Tan iyo markii magaalada Gaalkacyo soo gaareen bilo ka hor ciidamo xooggan oo uu hogaaminayay taliye-xigeenka ciidanka booliska Puntland Col; Muxiyadiin Axmed Muuse waxaa wax badan iska badalay amniga iyo xasiloonidda magaalada, iyadoo ay bar-bar socdaan barnaamijyo hor-marineed oo laga sameeyay waddooyinka iyo bur-burin lagu sameeyay dhismayaal ku yaalay goobo sharci darraa.